French Open 2021 Previu - site blog - jluis37.com
Isi / / Nyocha
A ga-amalite 2021 French Open na ọnwa a, yana dị ka ndị izizi mbụ nke okpomọkụ, ndị egwuregwu kachasị sin’akụkụ ụwa niile ga-asọ asọ na ohere nke miri emi na ụrọ. Na Rafael Nadal na-achọ ịtinye na ụyọkọ ụrọ na-eto eto na-eto eto, Roland Garros bụ ebe kachasị amasị ya igwu egwu, ọ bụkwa onye na-enweghị obi abụọ ọ bụla kwa afọ. Egwuregwu ya akwụsịbeghị, asọmpi a ka na-agba mbọ ịchọta ụzọ iji soro ndị Spain. Roger Federer na-alaghachi ịnwa ịme ihe website Id mmerụ ahụ jupụtaran’oge, ọ bụ ezie d e olile anya adịchaghị oke maka akụkọ Switzerland. Na ndị na-esote-gen egwuregwu dị ka Tsitsipas, Garin, na Zverev niile na-agan’ihu d e ụrọn’afọ a, asọmpi ahụ na-ejupụta na oke oke. Upsets na nke ọ bụla na-aga n’ihu ga-adị mkpa iji debe, na mpaghara afọ a nwere ike ịnye ụfọdụ egwuregwu tennis kachasị mma anyị ga-ahụ. Eze nke Clay na-ele anya ịgbachitere ocheeze ya na ubi ahụ, anya niile ga-adakwasị ndị na-achọ ịlụ nwanyị iji hụ onye ga-eweta nnukwu nsogbu.
Amụma / / Ike Omume Picks
Benchmark – Rafael Nadal 1.85 Nsogbu
Ikwu na Rafa abụghị nsogbu-ọkacha mmasị kwa afọ ọ nwere ahụike maka okpueze a ga-abụ ụgha zuru oke. “King of Clay” nwere ọtụtụ slams na mmeri na ụrọ karịa onye ọ bụla ọzọ na-egwu egwuregwu tennis, ọ na-achịkwa elu karịa ndị ọzọ. Na egwuregwu na-adaba oke elu yana ike dị egwu, Nadal nwere nnukwu ngwaọrụ iji wedata ndị ọ bụla na-emegide ya. Nloghachi un nke ije ozi yana ike ịnọ na isi ga-enye un ọtụtụ ohere imebi, ma kwesiri ịhụ un opekata mpe na njedebe.
Nyịnya Na-agba Ọchịchịrị – Alexander Zverev 12.50 Nsogbu
Alexander”Sascha” Zverev ruo ugbu a, enweela oge ụrọ kwanyere ugwu. Nnukwu ọrụ un t ike dị ike hụrụ un ka ọ na-atụgharị ndị mmegide dị iche ichen’oge nna ukwu ma buru ya gaa mmeri na Madrid. Onu ogugu nke anu ohia nke German adighi nso na oghere ATP, obu ezie na uche un nwere ike ichu ujo mgbe ufodu. N’ịbụ onye meriri Nadaln’oge a t ụrọ, Zverev nwere nnukwu égbè iji mee ka ọ dị omimi ma merie ihe niile, ihe anyị na-ekwu kwa afọ. Agbanyeghị, afọ that a nwere mmetụta dị iche na ya, nke ziri ezi.
Otun’ime Nde – Religious Garin 170.00 Odds
Christian Garin bụ onye kachasị egwu bọọlụ tennis nke Chile kemgbe Nico Massu laghachiri ọtụtụ iri afọ gara aga. Garin bụ onye ọkpụkpọ amụrụ nke ọkpụkpọ, ma nwee ọsọ d e nkà iji mepụta mmebi megide ọtụtụ ntinye. Ọ nwere ike igwu maka isi yana merie ha d e mpi ekele maka nku ya dị iken’akụkụ abụọ. Ọ bụ ezie na ọ bụghị onye nwere mmụọ kachasị mma, egwuregwu ya dabara adaba maka oroma, ọtụtụ ga-ekwenye na ọ bụ onye egwu egwu na akụkụ a nke afọ. Imeri Santiago dị mma, mana ọ nwere ike iwukwasị ya na Paris?
Enwere nsonaazụ dị iche iche ga – ga ekwe omume French Open a mana, mana naanị otu nwere ike ịpụta mmeri. Ndi nnukwu ato a ga – enye ibe ha agha kacha sie ike? Naanị oge ga-agwa.